भण्डारीको ‘सुनको पहाड’ सार्वजनिक
कला/साहित्य बुधबार, असोज ८, २०७६
साहित्यकार विष्णु भण्डारीको उपन्यास ‘सुनको पहाड’ ७ भदौमा सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौँस्थित मन्डला थिएटरमा भएको कार्यक्रममा नेकपा नेता राम कार्की, लेखक डा. अर्चना थापा र बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता एकराज भण्डारीले उपन्यास सार्वजनिक गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा नेता कार्कीले भण्डारीको उपन्यासमा जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएकाका परिवारले भोग्नु परेको पीडालाई प्रस्तुत गरिएको बताए। भण्डारीले उपन्यासमा बलियो भाषा प्रयोग गरेको उनको भनाइ थियो । “घटनाको प्रस्तुति रोचक तरिकाले गरिएको हुँदा उपन्यास पढुँपढुँ लाग्ने खालको छ”, उनले भने ।
लेखक डा. अर्चना थापाले उपन्यासमा जनयुद्धले थोपरेको पीडा र त्यसको जटिल पक्षलाई लेखनमा मिहीन ढंगले उतारिएको बताइन्। उपन्यासले बहुल नायक प्रस्तत गर्नु, कथाको प्रस्तुतिकरण महिलाको कोणबाट गरिनु, स्वैरकल्पनाको सही र उपयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनु उपन्यासको सबल पक्ष भएको बताइन्। लेखन शैली र कथ्य दुवै हिसाबले पुस्तक बलियो रहेको उनले बताइन् ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य तथा अधिवक्ता एकराज भण्डारीले उपन्यासमा आफूलाई धेरै ठाउँमा पाएको बताए । कतिपय ठाउँमा आफ्ना वेपत्ता छोरा विपिन भण्डारी र उसका साथीहरुलाई पनि पाएको उनले बताए । लेखकले परिकल्पना गरेजस्तो बेपत्ता परिवारको पीडालाई बुझेर आत्मआलोचना गर्ने पात्र अझै पनि समाजमा पैदा नभइसकेकोले उपन्यास अध्ययनले त्यसतर्फ झक्झक्याउने भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे।
भण्डारीको यो दोस्रो उपन्यास तथा समग्रमा नवौँ कृति हो । यसअघि उनको उपन्यास पहेँलो घाम प्रकाशित छ । ‘सुनको पहाड’ फिनिक्स बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।